July 2011 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 11:55 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 12:57 AM | No မှတ်ချက် |
စာပေနိုင်ငံရေး/ Literary Poltics
by Our Villagers on Saturday, July 30, 2011 at 7:57pm
အရင်ဆောင်းပါးတစ်စောင်မှာ ဒီလို ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ … လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ်အတွင်းက စာပေဝေဖန်ရေးနဲ့ စာပေသီဝရီနယ်မှာ အရေးပါတဲ့၊ ကြီးမားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အပြောင်းအလဲကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမတစ်ခုက စာပေဝေဖန်ရေးဆရာတွေဟာ သူတို့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ နယ် (ဝေဖန်ရေး domain) ကို ချဲ့ထွင်လာကြတယ်။ အကြောင်းအရာအသစ်တွေ၊ အမျိုးအစားအသစ်တွေ စာသား အသစ်တွေကို ကိုင်တွယ်လာကြတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ … the theory သီဝရီဆိုတာ ပေါ်ထွင်းလာခဲ့တယ်လို့ တင်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု နောက်လှုပ်ရှားမှု (၀ါ) အပြောင်းအလဲကြီးအကြောင်း ဆက်ပါ့မယ်။
အံ့သြဖွယ်ရာ ခေတ်မှီ ဒူဘိုင်း မြေအောက် ရထားစနစ်
ဒူဘိုင်း မြေအောက် ရထားစနစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော အလိုလျောက် စနစ်သုံး မောင်းသူမဲ့ ခေတ်မှီရထား ကွန်ရက် ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်း ရထားစနစ်သည် မြို့တော်၏ အလယ်တွင် မြေအောက်သို့ ဝင်ရောက်သွားပြီးအချို့သော နေရာ များတွင် မြေပြင် ပေါ်သို့ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာကာ ကောင်းကင်တံတားဖြင့် မြို့ပေါ်မှ ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲသည်ကို တွေ့ရသည်။
Author: lubo601 | 4:49 AM |2Comments |
by Kyaw Thurein on Saturday, July 30, 2011 at 3:07am
ဒီနေ့ညနေသွားတက်ဖြစ်တဲ့ Parenting skills workshop လေးထဲက သားသမီးများနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ ဥပမာပြမေးခွန်းလေးတွေဟာ အဖိုးတန်လွန်းလို့၊ ကိုယ့်လိုပဲ သားသမီးရှိတဲ့ မိဘများအတွက် မျှဝေပေးပါတယ်။
အင်ဒရီယာနှင့် ဒုတိယအကြိမ် စကားပြောဆိုခြင်း
by Augustine Nge on Saturday, July 30, 2011 at 4:41am
ငါဟာ ကံနိမ့်နေသလား အင်ဒရီယာ...
မိုးလင်းလို့ မျက်စေ့နှစ်လုံးကို မဖွင့် မဖြစ် ဖွင့်လိုက်တော့ အမှောင်တွေ ဖုံးလို့ရယ်...
နေ့တနေ့ရဲ့ နယ်နိမိတ် မျဉ်းကို... ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနဲ့... ခိုးဝင်လာခဲ့တဲ့ မိုးကောင်းကင်ဟာ...
လိင်အလုပ်သမအဖြစ် အဲသည့်နေ့မှာ အရောင်းစားခံရတာပဲဖြစ်မယ်...
ငိုရှိုက်သံတွေဟာ ဆူညံ ကျယ်လောင်... ...
"မိန်းမ...........ယောက်ျား......ဘ၀ဆိုတာ......... တစ်ကယ်ပဲ ဒီစာမူအတိုင်းပဲလား ဖတ်ကြည့် လိုက်ကြပါနော်."
Author: lubo601 | 4:22 AM | No မှတ်ချက် |
Cloud Cuckoo Land created the doc:
>>>>>>>> **>>>>>>>> *မိန်းမဆိုတာ....
>>>>>>>> *If you kiss her, you are not gentlemen
>>>>>>>> သင်ကသူ့ကိုနမ်းလိုက်ရင်... သင်ဟာလူကြီးလူကောင်းမဆန်သူ
>>>>>>>> If you don't, you are notaman
>>>>>>>> မနမ်းတဲ့အခါ... သင်ဟာ ယောင်္ကျားမဟုတ်
>>>>>>>> If you praise her, she thinks you are lying
>>>>>>>> သင်ကသူ့ကိုချီးကျူးလိုက်ရင်... သင်လိမ်နေတယ်လို့ထင်တယ်..
>>>>>>>> If you don't, you are good for nothing
မြန်မာကဗျာ၏ ခရီးရှည် သည် သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် ကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီ။ အင်းဝ ခေတ်၊ တောင်ငူခေတ်၊ ကုန်း ဘောင်ခေတ်တို့၌ မြန်မာကဗျာသည် ပုံ သဏ္ဌာန်သစ် အမျိုးမျိုးဖြင့် စည်ပင် ဖွံ့ထွားခဲ့သည်။ ကိုလိုနီ ခေတ် လွတ်လပ်ရေးခေတ်တို့၌ လည်း မြန်မာကဗျာခရီးသည် ရပ် တန့်မသွားဘဲ အရှိန်အဟုန်နှင့် ရှေ့ သို့ ချီတက်နေသည်။
"လူတစ်ယောက်နှင့် အချက် ၃ ချက်"
တဆင့်တဆင့်နဲ့ကျွန်တော့မေးလ်ထဲရောက်လာလို့ပါ။ ဒီအချက်ကလေးတွေဟာ သိလဲသိသင့်၊ လိုက်လဲလိုက်နာသင့်တာမို့၊ အားလုံး အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဆီ တစ်ခါ၊တစ်ခေါက် အရောက်လာပြီး – နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရောက်လာဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ အရာ ၃ ခု -
"သေချာရေရာမှု ဘာမှမရှိတဲ့ ဟန်ပြ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အဖြေရှာ တွက်စစ်ကြည့်လေသော် …"
Min Thant Syn created the doc:
၂၀၁၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့က NLD ပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ် အုပ်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြန်လေပြီတဲ့။ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်တွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ အယောင်ဆောင် အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ ပထမ ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပါပဲ။ ဒီတွေဆုံဆွေးနွေးမှုကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေက အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အလားအလာကောင်း လို့ မျှော်လင့်ကြိုဆိုကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ပြည်သူ တွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် သေချာရေရာမှု ဘာမှမရှိသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:00 AM | No မှတ်ချက် |
by Burma Thwe on Saturday, July 30, 2011 at 2:20pm
Author: lubo601 | 2:36 AM | No မှတ်ချက် |
ဧည့်သည်ဆိုတာ ဘယ်ကိုရောက်ရောက် ခဏတာပဲတည်းခိုခွင့်ရပြီး အချိန်တန်ရင် ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကို ပြန်သွားရတာပါပဲ။ ဒီအိမ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲပျော်ပျော် ဘယ်လောက်ပဲနေချင်နေချင်.. အချိန်တန်လို့ အိမ်ရှင်က လက်မခံချင်ဘူး.. ကိုယ်လည်းအိမ်ပြန်ရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားရမှာပါပဲ။
Author: lubo601 | 2:26 AM | No မှတ်ချက် |
by ဆောင်း နှင်းပွင့် on Friday, July 29, 2011 at 1:56am
ကျွန်မအရင်က ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး အခုရေးသားမယ့် အကြောင်းအရာကလည်း တကယ့်ကို လက်တွေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာမရေးနိုင်ဘဲ ကြန့်ကြာခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို စိတ်ရှည်သီးခံစွာ စောင့်ဆိုင်းပြီး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ Rukia ကိုချစ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:11 AM | No မှတ်ချက် |
(၁) သူပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကြားဖူးပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ ဇာတ်အခင်းအကျင်းက မူရင်းနှင့် အတန်ငယ် ကွဲလွဲနေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်က နားစိုက်ထောင်နေပါတယ်။ သူ့ဇာတ်အခင်းအကျင်းက ဒီလိုပါ။ သဲကန္တာရကြီးကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ခရီးသွားကြမည့် ခရီးသည်တစ်စုဟာ နေ့ အချိန်မှာ ပူပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် အပူသက်သာတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ နားနေကြတယ်။
Author: lubo601 | 2:01 AM | No မှတ်ချက် |
by Hla Shwe on Thursday, July 28, 2011 at 11:20pm
Author: lubo601 | 1:47 AM | No မှတ်ချက် |
ဘ၀ရဲ့အကြောင်းကို တစ်စေ့တစ်စောင်း ပြန်လည် ၍ စဉ်းစားမိဖို့ကောင်း
ပါသည် ။ လူဖြစ်လာရသည့် တစ်ခဏအတွင်း ယခုလက်ရှိ ဘ၀
ကျမှသာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်အကြောင်း ဟောင်းခဲ့တာ ၊ သစ်ခဲ့တာ ၊ ကောင်းခဲ့တာ ၊
မကောင်းခဲ့တာ တွေကို စောင်းငဲ့ပြီး တစ်ဖန်ပြန်လည် စဉ်းစားတွေးတောပြီး
စမ်းတစ်ဝါးဝါး သိနိုင်စဉ် ဘ၀ ရဲ့ အမျှင်အစတွေကို အဆင်ပြေသလို ဆွဲထုတ်ပြီး
ဝေဖန် ခွဲခြား ရှုမြင် ကြည့်ပြီး သိနိုင်သမျှတွေကို ဆင်ခြင်၍ ကြည့်ကြပါစို့ ။
[MM Daily Mail:2180] Japan's Latest Trains..
Author: lubo601 | 1:30 AM | No မှတ်ချက် |
by Min Kyaw Khine on Thursday, July 28, 2011 at 7:04pm
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသို့ စာပေဟောပြောပွဲ သွားရောက်စဉ်က တွေ့ရသည့် ဆရာချစ်ဦးညို (အင်္ကျီ အနက်)နှင့် ဆရာအော်ပီကျယ် - ဓါတ်ပုံ APK - Face book)
by Nyo Htet on Thursday, July 28, 2011 at 1:29pm
နိုင်ငံရေးဆိုသည်ကတော့ အများနှင့်ပတ်သက်သော အနက်ရသည်ကို လူတိုင်းသိကြသည်။ တယောက်တည်း မဟုတ်၊ တကိုယ်တည်း မဟုတ်၊ အများနှင့်ပတ်သက်ခြင်း။ တယောက် ကောင်းစားခြင်း မဟုတ်၊ အများး ကောင်းစားခြင်း။
ယဉ်ကျေးမှု ဆိုသည်ကတော့ ႟ရိုင်းရာမှ ယဉ်လာသည် အထိ တိုးတက်လာခြင်း ဟူသော အနက်ထွက်သည်ကို လူတိုင်းသိကြသည်။
" ဖော်ကောင် "
လူတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို "အသုံးမကျတဲ့လူ" လို့ ပြောလို့ အဖမ်းခံရသတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် တရားသူကြီးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်နဲ့ ၆ရက် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ကိုပေးရသလဲလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက " ပြစ်ဒဏ် ၆ရက်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို စော်ကားတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ် ၁၀နှစ်က နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိ
ု ဖော်ကောင်လုပ်တဲ့အတွက်" လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။
by Augustine Nge on Thursday, July 28, 2011 at 10:36pm
ကိုယ်ပိုင် ကားက မရှိတော့ပြီဆိုတော့ကာ ဘယ်သွားသွား... နီးရင် လမ်းလျှောက်... ဝေးရင် ဘတ်စ် စီး... သည်လိုနဲ့ပဲ ဘ၀ခရီး ဆက်နေရသပေါ့လေ...း) သည်နေ့တော့ ရှေ့လာမယ့် တပတ်စာအတွက် စားဖို့ သောက်ဖို့တွေကို လမ်းလျှောက်ပြီး သွားဝယ်ရတယ်... တော်ပါသးတယ် SafeWay ဆိုတဲ့ စတိုးတခုက အနားမှာ ရှိလို့... အရင်ကတော့ အလုပ်က ပြန်လာတိုင်း အဲမှာ ဆင်းဆင်းပြီး ၀ယ်ဖြစ်တယ်...
"ကမ္ဘာလောကကြီး သာယာစေချင်လျှင် သင့်မျက်နှာကို အရင်ဆုံး ပြုံးထားလိုက်ပါ"
တစ်နေ့ ကျွန်တော် နယူးယောက်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့်အတူ တက္ကစီစီးသည်။ကားထဲက ထွက်တော့ မိတ်ဆွေက ဒရိုင်ဘာကို ပြောသည်။ “ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊ ခင်ဗျားကားမောင်းပုံ သိပ်ကောင်းတာပဲ”တက္ကစီဒရိုင်ဘာ...က ရုတ်တရက် တွေသွားသည်။ ပြီးတော့မှ “ဘာလဲဗျ၊ နောက်တာလား”ဟု ပြန်ပြောသည်။“မဟုတ်ဘူးဗျ၊ မနောက်ပါဘူး၊ ကျွန်တော် တကယ်ပြောတာပါ၊ ကားတွေရှုပ်ယှက်ခတ် နေတဲ့ နေရာမှာ ခင်ဗျားတည်တည် ငြိမ်ငြိမ်အလုပ်လုပ်တာသဘောကျလို့ပါ”
Author: lubo601 | 6:20 AM | 1 Comment |
by Hlaing Bwa Maung on Thursday, July 28, 2011 at 4:33am
by Myat Lay Ngon on Thursday, July 28, 2011 at 6:42am
Min Thant Syn createdadoc.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ လွန်ခဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကာလတ​စ်လျောက်လုံး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်နေတဲ့ တပ်မတော်၊ အင်န်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တ...ဲ့ အတိုက်အခံ အုပ်စုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကလည်း ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာ ပြောနေခဲ့တယ်။
မြေဇာပင်တို့ငိုညီးသံ
Author: lubo601 | 5:20 AM | No မှတ်ချက် |
by Lu Cifer on Thursday, July 28, 2011 at 6:43am
ဘီလူးရုပ်နဲ့ဇော်က ကနေကြ
သောင်းသောင်းဖျဖျ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ။
တိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီး မစဉ်းစားခင် အခြေခံကျတဲ့ အိမ်ထောင်စုလေးတခုနဲ့ ဥပမာထားပြီးပဲ အရင် စဉ်းစာကြည်ကြရအောင်ပါ။
နိုင်ငံရေးသည် ပကတိသဘောကို ပစ်ပယ်၍ မရ
လောက၌ အရာရာ တိုင်းသည် နိစ္စဓူဝ မဟုတ်ပါ။ အနိစ္စ၊ အဓူဝ အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲလျက် ရှိနေပေသည်။ ဤသည်မှာ သဘာဝ သဘော၊ ဓမ္မသဘော အစစ်အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အရေးတော်ပုံ တစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက် လာပါက ယေဘုယျ ရှုမြင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ...်ဖြာ ရှုမြင်မှုဟူ၍ အမျိုးမျိုး လေ့လာကြပေသည်။
"အရေပြားပေါ်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည့် ဆေးဓာတ်မတည့် အလာဂျီလက္ခဏာ"
Author: lubo601 | 4:52 AM | No မှတ်ချက် |
ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆေးဝါးအာနိသင်ရှိသည့် ပစ္စည်းများကို ပါးစပ်မှ သောက်သုံး(Ingestion)ခြင်း၊ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ထိုးသွင်းခြင်း (Injection) များပြုလုပ်ရာတွင် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ရခြင်းမျိုးကို ဆေးကြောင့် ဓာတ်မတည့် အာလာဂျီ (Drug allerg) ဟု ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ထိုဓာတ်မတည့် အာလာဂျီ၏ သက်ရောက်မှုများသည် အရေပြားတွင်လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများတွင်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
မြန်မာ့ ကျန်းမာရေး စနစ်
Author: lubo601 | 4:44 AM | No မှတ်ချက် |
written by Juan Rama
by Ye Myint Thu on Thursday, July 28, 2011 at 6:19am
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထိ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗြိတိန် ကျန်းမာရေး စံနစ် (British National Health Service) ပုံစံအတိုင်း အခမဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စံနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ Government Tax Revenue ခေါ် အခွန်အခကောက်ခံမှု မှ တစ်ဆင့် အစိုးရက အလုံးစုံ တာဝန်ယူပေးသည် အခမဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု (Free Health Care) သည် ထိုစဉ်က သန်းပေါင်းနှစ်ဆယ်မျှသော ပြည်သူ လူထု အတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
'စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု မရှိဘဲ သင်ယူခြင်းဟာ လုပ်အားဆုံးရှုံးခြင်းပါပဲ' တဲ့
Author: lubo601 | 4:34 AM | No မှတ်ချက် |
လူတို့သည် အမှန်တရားကို တန်ဖိုးထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြောဆိုငြင်းခုံကြရာတွင် “အမှန်အတိုင်း ပြောပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောတာပါ”ဟု ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုသူများကပင်လျှင် မိမိသည် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူဖြစ်၍ အမှန်တရားဘက်ကသာ ရပ်တည်ကြောင်း ပြောဆိုတတ်ကြသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာပျက်ကိန်းအပေါ် သိပ္ပံအမြင်
Author: lubo601 | 4:10 AM | No မှတ်ချက် |
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ဝင် ရောက်ခဲ့ပြီး လအနည်းငယ် လွန်လာ ခဲ့ပြီ။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်သည် တဖြည်း ဖြည်း နီးကပ်လာလျက်ရှိသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်သည် လူတို့၏ စိတ်ဝင် စားမှုကို အတော်ခံရသောနှစ်ဖြစ် သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ရောက်မည်ကို တွေးပူနေကြသူများပင်ရှိသည်။ ယင်း နှစ်တွင် မကြုံစဖူးသော ဧရာမ ဘေး အန္တရာယ်များ ပေါ်လာမည့်အရေး၊ အဆိုးဆုံးအနေနှင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက် သွားနိုင်မည့်အရေး ရှိသည်ဟု ဟော ကိန်းထုတ်သူကလည်း ထုတ်ကြ သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ အထင်ကရ သိပ္ပံပညာ ရှင်များက ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သုတေ သနပြု၍ စိုးရိမ်ဖို့မရှိကြောင်း ထုတ် ပြန်ထားသည်။
Myint Naing created the doc:
တစ်ခါက မျက်မမြင်တစ်ယောက်ဟာ တစ်ညမှာ သူ့မိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်ကို အလည် ရောက်နေလေတယ်။ ပြန်ကာနီးကျတော့ မိတ်ဆွေလုပ်သူက မျက်မမြင်ကို လမ်းမှာ မှောင်လေတော့ အဆင်ပြေအောင် မီးအိမ်လေးတစ်လုံး ယူသွားပါလားလို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ မျက်မမြင်ဖြစ်သူက ဟားတိုက် ရယ်လိုက်ပြီး… “ သြော်.. မျက်မမြင်ပါဆိုမှ မီးအိမ်လာပေး နေတယ်။ ကျုပ်က သွားနေကြပါ။ အကန်းပေမယ့် ကျုပ်ရဲ့ အိမ်ကို ဘာအကူ အညီမှ မပါပဲ လျှောလျှောရှူရှူ သွားလာနိုင်ပါတယ်ဗျ ” လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောလိုက်မိတယ်။
by Socretes Athenisian on Wednesday, July 27, 2011 at 8:52am
(ပိတောက်မြေသို့ပေးပို့လာသော စာအား မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ရေးသားသူ နတ်သမီးရေစင်အား အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ နောင်ကိုလည်း ထပ်မံရေးသားပါရန်ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။)
လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလ တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်သမိုင်းနောက်ကြောင်းတစ်ခု၏ တွန်းအားပေးမှု၊ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုမိုဆိုးဝါးလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေပေါ်တွင် ပြည်သူဘက်မှ တော်လန်မှုများ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားသော အရေးအခင်းသည် ၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် အကြီးအကျယ်ဆုံး ဆူပူမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ် ၁၉၈၈ နှင့် အခြားကြီး ခြားနားမှုရှိခဲ့သည် အဓိက နည်းပညာတိုးတက်နေမှုကြောင့် ဖြစ်သမျှကို တစ်မ္ဘာလုံးက တစ်ခဏချင်းသိစေနိုင်ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့နိုင်သမျှကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ပေမယ့် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ကောင်းကွက်ရော မကောင်းတဲ့ သတင်းများပါ အပြင်ကို ယိုထွက်ခဲ့သည်။
demos (people) kratos (rule)
by Minwunna Aung on Wednesday, July 27, 2011 at 11:02pm
ဂရိဘာသာဖြင့် demokratia ၊ အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် demos (people) kratos (rule) စသည့် စကားလုံးသည် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် democratie သို့ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပြီး၊ ဆယ့်ခြောက်ရာစုတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် democracy ဟု ထပ်ဆင့် ပြောင်းလဲသွားပြီး နောက်ပိုင်းကာလတလျှောက် ဒီမိုကရေစီဆိုသော စကားလုံးသည် ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွင်းသို့ တစထက်တစ တိုးဝင်လာခဲ့လေသည်။
အရေးပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူသူများအနေဖြင့် Foot Protection ဆိုင်ရာ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လေ့လာသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနီးကပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများသည် အရေးပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကို အများပြည်သူရှေ့တွင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် public image ကို မထိခိုက်စေရန် သတိပြုရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ အခြေအနေများ ရှုပ်ထွေးလာချိန်တွင် သင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ချမှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူများလဲ ဖြစ်ရပါမည်။
Myanmar, Burma နဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး
Author: lubo601 | 5:20 AM | 1 Comment |
by Socretes Athenisian on Tuesday, July 26, 2011 at 5:44pm
ဒီကနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့၊ ပြောတဲ့အခါ Myanmar လား Burma လား ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း အတော် ရှေ့တန်း ရောက်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ န၀တ လက်ထက်မှာ မြန်မာစကား အသံထွက်များကို အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေ ပြင်တယ်။
"ဂျာနယ်လစ်ဇင်နှင့် သတင်း (Journalism and the News)"
Linn Yaung created the doc:
သတင်းသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတဲ့အခါ သတင်းစာဆရာဆိုတဲ့ စကားဟာ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိလှဘူးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ယနေ့ ခေတ်မှာ သတင်းဖြန့်ဖြူးတာဟာ သတင်းစာ တစ်ခုတည်းက မဟုတ်တော့လိုပါပဲ။
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ဆိုရင် . .
. WRITTEN BY နေထွန်းနိုင်"
ဇူလိုင်လ ၆ ရက်။ ဗြိတိန်ပါလီမန်မှာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
တယ်။ ချက်ချင်း ဆိုသလိုပါပဲ။ Tabloid သတင်းစာ News of the World ရဲ့ သတင်းတွေက ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ကျင့်ဝတ် မစောင့်ထိန်းမှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးမှု၊ စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ် ကောင်းသော အပြုအမူ။ ဒီလို မှတ်ချက်တွေက ပလူပျံသွားခဲ့ပါတယ်။
News of the World သတင်းစာရဲ့ လုပ်ရပ်က ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျတွေကို ကြားဖြတ်ခိုးယူခဲ့ခြင်းက စခဲ့တာပါ။ လူပြိန်းကြိုက် သတင်းစာ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြတဲ့ Tabloid သတင်းစာတွေအဖို့ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာဟာ ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲခဲ့ပါရဲ့လား။
Author: lubo601 | 11:40 PM | No မှတ်ချက် |
by Eingyin Ta Khaine on Tuesday, July 26, 2011 at 11:04am
သည်စာလေးကို ခုပဲ ချရေးချင်စိတ်ပေါက်မိပါသည်။ ကျမစိတ်ထဲတွင် မွမ်းကျပ်နေသလိုခံစားရသည်မှာ မကြာခဏပင်ဖြစ်တော့သည်။ ကျမသည် လောဘကြီးသူပီပီ လုပ်ချင်တာတွေ အင်မတန်ကိုများလွန်းသည်။ တကယ်တော့ စာရေးတယ်ဆိုတာ အင်မတန် အာရုံစိုက်တည်ငြိမ်ရသည်။ ကျမကမဟုတ် တခါတလေ ဟိုဟာလုပ်ရမှာပါလား... ဒီစာရေးရအုံးမယ်... ဟိုစာရေးရင် ကောင်းမလား..ဆိုတာမျိုးတွေပင် ရှိနေတတ်သည်။ ဒါကြောင့် ဌားထားသည့် စာအုပ်တွေမှာ ခုထိပင် တအုပ်မှ အဆုံးမသတ်ရသေးပါ။
Author: lubo601 | 11:34 PM | No မှတ်ချက် |
by Kyaw Thurein on Wednesday, July 27, 2011 at 12:59am
(ဖိနှိပ်ခံရမှု၊ ဘေးဖယ် ထုတ်ခံရမှု၊ လွဲမှား နားလည်ခံရမှု
ဆယ်ကျော်သက်တွေဖက်က ရေးဖွဲ့ ပေါက်ကွဲတဲ့ Korn ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့
ကိုယ့်ဘဝ တလျှောက်လုံး ပတ်သက်ခဲ့ရသမျှ
အိမ်၊ လမ်း၊ ရွာ၊ ကျောင်းက လူအားလုံးကို တစ်ပုဒ်ချင်း ပစ်ထည့်လိုက်ချင်တယ် ။
by Myint Naing on Sunday, July 10, 2011 at 10:24am
တစ်နေ့မှာ အလွန်ချမ်းသာလှတဲ့ အဖေဖြစ်သူက သူ့သားလေးကို တောမြို့လေး တစ်မြို့ကို အလည်အပတ်
သွားရောက်ပြီး ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀ကို ပြချင်လို့သားကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီတော
မြို့ရွှာလေးမှာ နှစ်ရက်တစ်ည လောက်နေပြီး သူတို့ရဲ့ အားလပ်ရက်ကို
ကုန်ဆုံးကာ ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို တွေးတောလေ့လာ နေတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ အဖေဖြစ်သူက သားကို မေးတယ်။
"အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွတ်ချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ"
Author: lubo601 | 11:12 PM | No မှတ်ချက် |
by Myint Naing on Tuesday, July 26, 2011 at 8:05pm
by Khaing Min on Tuesday, July 26, 2011 at 8:29pm
လ-၁၃ နဲ့ ဆရာကြီး အေးမင်း
by Comrade Eagle on Tuesday, July 26, 2011 at 11:51pm
နှင်းမကျပေမယ့် မြူတွေဆိုင်းပြီး ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းတဲ့ ဆောင်းနံနက်ခင်း တစ်ခုမှာ ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေခဲ့ရဖူးတယ်။ တပ်မတော်သား ဘဝမှာ ရာထူးအဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆုံတွေ့ရတာ၊ ခွဲခွာရတာဟာ အဆန်းမဟုတ် ပေမယ့် ဆရာကြီးအေးမင်း (အမည်ရင်း မဟုတ်) နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရ၊ သူ့ဆီက ကြားသိခဲ့ရတာတွေကတော့ မမေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စခန်း (ပွိုင့်-၂၉၄၈)ကို ယာယီတာဝန်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ခမရ(-) က တပ်ကြပ်ကြီးအေးမင်း အဲဒီ့ မနက်မှာ သတင်းပို့လာပါတယ်။ စခန်းမှာ ဆရာကြီးတို့ အဖွဲ့ ခေတ္တနေဖို့ ထိုင်ဖို့ နေရာ ချထားပေး အပြီးမှာ စကားစမည် ပြောဖြစ်ခဲ့ရာက သူ့ဘဝ တစိတ်တပိုင်းကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာကြီးက အသက်(၅၀)နီးပါး၊ စစ်သက်(၃၀) ပြည့်ခါနီးပြီ။ လူပုံ ပိန်ပိန်ပါးပါး၊ စကားနည်းပြီး မျက်နှာကတော့ အမြဲတမ်း ပြုံးရောင်သမ်း နေတတ်တယ်။
ယုံချင်ယုံ ၊ မယုံချင် နေ ..
(၁) ပြင်သစ်လူမျိုး ဂျိုးဇက် နစ်ဖိုးနစ်ဆေးသည် 1826 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံးသော ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်သည်..
သဘာဝအလှ ရူခင်း တစ်ခုကို အပေါ်စီးမှ ရိုက်ကူးခ့သော ဓါတ်ပုံဖြစ်သည်.. သူ၏ ရုပ်ပုံကို Neliograph ဟုခေါ်ခဲ့သည် ...
လူ၏ ပုံကို သဘာဝအလင်းရောင်နှင့် အရိပ်တို.ဖြင့် ပထမဦးဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့သူကတော့
လူးဝစ် ဂျက်စ်မန်ဒီ ဒါးဂါး (1787 - 1851) ဖြစ်သည် ။
အဲဒီခေတ်က cameraman တွေကတော့ အောက်ဒိုး တစ်ပုံ ရိုက်ဖို. ခြောက်ဘီးကား တစ်စီး နဲ့
ကူလီဆယ်ယောက်လောက် ငှားရမှာပဲဗျ .. :)
by Yoe Khittaya on Tuesday, July 26, 2011 at 12:48pm
by Ju Thet San on Sunday, July 24, 2011 at 4:20pm
Shwe Aeim Siှshweaeimsi@gmail.com to mrsorcerer, a_lin_say_ta_m.
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အာမေးနီးယားပြည်၌ ရစ်ချတာစကေး ၈.၂ ရှိသည့်
အင်အားပြင်းထန်သော မြေငလျင်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ တိုက်တာအိမ်ရာတွေ
မြေကြီးမှာ ပြားပြားဝပ်သွားပြီး ၄ မိနစ်ပင် မပြည့်သည့်အချိန် အတောအတွင်း
လူပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။
by Ju Thet San on Tuesday, July 26, 2011 at 1:19pm
မကြာမှီက လွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ အဖြစ် နိုင်ငံခြားရောက်နေသူ ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ဦး က စာရှည်ကြီး တစ်ဆောင် ရေးလိုက်တကို ဖတ်ရတယ။ ဒီခေတ်လူငယ်တွေ သူ့အကြောင်းသိကြရင် ကောင်းမှာ ပဲလို့ စိတ်ကူးရသွားတာကြောင့် ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတယ်။
by Zay Yar Phyo on Tuesday, July 26, 2011 at 3:58pm
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူတို့သည် ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်မသိကြ။
ကိုယ့်နေရာကို ကိုယ်တန်ဖိုးမထားကြ။ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်မသိကြ။
တောင်ငူမြို့သို့ စာပေဟောပြောပွဲ သွားရောက်ခဲ့ရသည်။အမေ့အိမ်ဟိုတယ်တွင် နေရာချထားပေးသည်။အိပ်ခန်းထဲတွင် ရှိသော စလောင်းတီဗွီမှ အင်တာဗျူးတစ်ခုလာနေသည်။၎င်းအင်တာဗျူးကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်မိခဲ့သည်။ သဘောကျသည်။
by Kyaw Thurein on Tuesday, July 26, 2011 at 4:54pm
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောသမ္ဗီပြည် ဃောသိတာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏၊ ထိုအခါ အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၏ အလုပ်အကျွေး ကကုဓမည်သော ကောလိယ၏ သားသည် ယခုပင် သေလွန်၍ ဈာန်စိတ်ဖြင့် ပြီးသော တစ်ခုသော ဗြဟ္မာဘုံ၌ ဖြစ်၏၊ ထိုကကုဓအား မဂဓတိုင်းရှိ ရွာနယ် နှစ်နယ် သုံးနယ်မျှလောက်သော အတ္တဘော 'ခန္ဓာကိုယ်' ကို ရ၏၊ ထိုကကုဓဗြဟ္မာသည် ထိုမျှလောက်သော အတ္တဘောကို ရခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုလည်း မပင်ပန်းစေ၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မပင်ပန်းစေ။
[By Khin Maung Nyo]
ကျွန်မတို့တွေ ကလေးအရွယ်က ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ တော်တော်များများ ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ သစ်ရွက်လှုပ်တာတောင် တခစ်ခစ် ရယ်ချင် ရယ်နေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေက လောကအကြောင်း လူတွေအကြောင်းကို ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု၊ သုံးခုစာလောက် ကြုံတွေ့ပြီးတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ မျက်စိထဲမှာတော့ တော်တော်ကို အချိုးမပြေတာပါပဲ။
အရာရာ တိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာ အတုယူစရာ အင်မတန် ပေါပါတယ်။ မကောင်းတာက အတုယူဖို့ လွယ်တော့ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ အားအားရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာ၊ ညလုံးပေါက် ဂိမ်းဆော့တာ၊ တစ်ခုခုဆို ကိုယ်က ဦးအောင် မိုက်ကြည့်ကြည့်တာ၊ လိုအပ်ရင် အပေါင်းအသင်း အားကိုးနဲ့ ရိုက်မယ် နှက်မယ် ရန်ဖြစ်မယ် လုပ်တာ၊ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေတာ ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေ နားရင်းအုပ်ချင်လောက်တဲ့ အပြုအမူများလဲ တော်တော် တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်နေကြပါတယ်။
မန္တလေးသို့ ခရီးနှင်၊ မော်လမြိုင်ကိုရောက်
Author: lubo601 | 12:54 AM | No မှတ်ချက် |
[By Bo K Nyein]
ဒေါက်တာ ထွန်းကျော်ငြိမ်း | တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၄ မိနစ်
လျှပ်စီးလက်လျှင်လည်း အလင်းလက်တံတွေက ဖြောင့်ဖြောင့်မဟုတ်ဘူး ရိုးမတောင်တန်း တွေရဲ့ တောင်ထိပ်တွေ
ကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ဖန်ကတော့လို တသမတ်တည်း ချွန်မနေကြဘူး။
သို့ပေမယ့် လူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုကတော့ ဖြောင့်ဖြောင့်တွေးပဲ တွေးတဲ့အကျင့်က စွဲနေတယ်။
မြိုင်ထလို့ ပြောပြီး တပင်တိုင်သာ ကခိုင်းကြတဲ့ ပွဲ
Author: lubo601 | 6:47 AM | No မှတ်ချက် |
by Socretes Athenisian on Monday, July 25, 2011 at 2:17am
( မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကြောင်းကို ပြန်သုံးသပ်တဲ့ ပို့စ်ရေးနေတုံး ကိုဒီးဒီးနဲ့ ရှမ်းပဲပုတ်ရဲ့ သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး ရောက်လာလို့ အလှည့်ပေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ တစ်ချို့ ကိုယ်ရေး အချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ သိတာတွေနဲ့ ကွဲလွဲနေပါတယ် ။ ဥပမာ။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ရွှေက အင်္ဂလန်ဘုရင့် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သိသူများ ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ )
လွန်ခဲ့သော လပိုင်း အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ခေတ်ပြိုင်သတင်းဂျာနယ် မျိုးချစ်တပ်မှူးကြီးများနဲ့ပတ်သက် ပြီးရေးတဲ့အတွဲ ၁-၂စာကို ခေတ်ပြိုင်မှာဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မျိုးချစ် တပ်မှူးကြီးတွေရဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ် မီးမှောင်းထိုးပြတဲ့ စာကြောင့် ပြောချင်တာလေး ပေါ်လာလို့အခုမှရေးရတာပါ။
by Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ on Monday, July 25, 2011 at 4:04am
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ လူတွေက မျောက်ငါးကောင်ကို လှောင်အိမ်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး လှောင်အိမ်ထိပ်မှာ ငှက်ပျောသီးတစ်ခိုင်ကို ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ လှောင်အိမ်မှာ အော်တိုစမ်းသပ်ခလုတ်တစ်ခုလဲ တပ်ဆင်ထားပြီး မျောက်တွေက ငှက်ပျောသီးကို သွားယူမယ်ကြံတိုင်း ရေနဲ့အပက်ခံကြရတယ်။
Facebook ရဲ့ Like Button လေး
by Burma Thwe on Monday, July 25, 2011 at 12:14pm
Facebook သုံးစွဲလာတာ တနှစ်ကျော်လောက် ရှိလာတော့ တော်တော်လေးကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာသလို မိတ်ဆွေတွေလည်း တစတစနဲ့ ပိုမိုတိုးပွားလာလို့သုံးတတ်ရင်
ဆေး မသုံးတတ်ရင် ဘေးဆိုတဲ့ စကားလေးက သိပ်မှန်ပါလား ဆိုတာ စဉ်းစားမိရင်းက ဒီစာစုလေးကို ရေးချမိလိုက်ပါတယ် ။
ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်........ ကိုဗမာ့သွေး Facebook မှာ အကြိုက်ဆုံးက ဘာလည်းတဲ့.... ။ မေးတဲ့လူတွေ နည်းနည်းများလာတယ် ။ ကျနော်လည်း ချက်ခြင်းကြီး အဖြေမပေးဘဲ ငါစာရေးပြီး အဖြေပေးမယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကို စကားပလ္လင် ခံထားလိုက်တယ်... ။ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေကကော Facebook မှာ ဘာကို အကြိုက်ဆုံးလည်း......... ။
"ဘိနပ် စီးခြင်း ပြဿနာ"
[By ဗုဒ္ဓဘာသာ / အတွေးအမြင်]
စာရေးသူတို့ မြန်မာလူမျိုးများက ဘုရားကျောင်းတွေအပေါ် ဘိနပ်မစီးခြင်းကို အလေးထားပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ဘုရားကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတွေ အတွင်းမှာ ဘိနပ်စီးသွားကြသည်။
ဘုရားပရ၀ုဏ်အတွင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း တပည့်တော်တို့လို လူဝတ်ကြောင်တွေ ဘိနပ်စီးသွားခြင်း သင့်-မသင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရှင်ဘုရား အားတဲ့အခါ ရှင်းပြပေးပါဦးဘုရားတဲ့။ ဒီမေးခွန်းကမကွေးဆေးတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ် ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်က
မေတ္တာရပ်ခံထားတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူက ‘‘မောင်ရင်--ဒီလိုမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေထားတာတွေ အများပြားရှိပါတယ်။
လူတယောက်၏ ဘ၀လမ်းကြောင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ေ​ စ အတွေးအခေါ်က အဓိကကျလေသည်။ အတွေးအခေါ် ရှင်းလင်းမှသာ လုပ်ဆောင်ရမည့် လမ်းကြောင်းကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တိကျစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးနေလျှင် လမ်းစဉ်များကလည်းေ၀၀ါးနေတတ်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်လဲ တိကျပြတ်သားမှု မရှိဖြစ်တတ်သည်။ ကြံတိုင်းမမြောက်ပဲ လုပ်တိုင်း မအောင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
အင်တာနက်ပေါ်က ဟာသများ.. :D
Author: lubo601 | 3:55 AM | No မှတ်ချက် |
by Min Min Kyaw Yin on Monday, July 25, 2011 at 2:45pm
Author: lubo601 | 6:47 AM |2Comments |
by Ernesto Kee Ling on Thursday, July 7, 2011 at 10:15pm
ခရစ်တော်ပေါ်ပြီး နှစ်ပေါင်း 500 (အေဒီ 500) ကျော်ကနေ ခရစ်တော်မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်3း000 (ဘီစီ3000) အတွင်း အခု အေဒီ2010 က စရေတွက်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 5000 ကျော်အတွင်း လူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီသဖွယ် ကြီးကျယ်ခန်းနားသော.. အဆောက်အဦးများကို http://wikimyanmar.co.cc မှ ယခုခေတ် တည်ဆောက်မှုတည်းပညာများနဲ့ ယှဉ်နိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ..
Facebook နှင့် Google တို့၏ သူသေ ကိုယ်မသာ တိုက်ပွဲဂျီး
Author: lubo601 | 1:42 AM | No မှတ်ချက် |
Linn Yaung 3:27pm Jul 24
Facebook နှင့် Google+ အားပြိုင်မှု အလွန်ပြင်းထန်လာနိုင်
Social Networking ၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်နေသော Facebookနှင့် Googleက အသစ်တင်ဆက်လိုက်သည့် Google+တို့သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် အလွန် ခါးသီး ပြင်းထန်လိမ့်မည်။
၂၀-၁၀-၂၀၀၈ နေ့ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်၌ `ခေတ်ပြိုင်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အခြေခံမဟာ ဗျူဟာရှုထောင့်များဖြင့် စဉ်းစားခြင်း´ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ မြန်မာနိုင်ငံရေး၏ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်ထွန်းမှုကို သက်သေထူသည့်အနေဖြင့် `လွတ်လပ် ရေးရပြီးကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရေး ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွင် သမ္မနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်တွေ ဇာတ်သိမ်း မကောင်းခဲ့ကြပေ။
Author: lubo601 | 1:28 AM | No မှတ်ချက် |
တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့တပ်ကို တပ်နဲ့တူအောင် ပြုပြင်ရန်က ပထမဦးဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးဟု မြင်ပါသည်။ ဒီပြင်ဌာနတွေ လာဘ်စားတာ၊ အစိုးရစက်ရုံတွေ စီးပွ...ားရေး ဆန်ဆန်မလုပ်တာ၊ နောက်ဆုံးကျောင်းသားတွေ စာခိုးချတာကအစ ပြုပြင်စရာများဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့်၊ တကယ်တန်း တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးကစလို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အားလုံး အဓိကတာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်နေတာတပ်ပါ။
Author: lubo601 | 1:16 AM | No မှတ်ချက် |
မလုပ်တာနဲ့စာလျှင် လုပ်တာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆသည် လုံးဝမှားယွင်းသော အယူအဆဖြစ်သည်။ No news is good news နှင့် “ ထိုင်နေရင်အကောင်းသား၊ ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိ ” ဆိုတဲ့ သဘောတရားများကိုလည်း နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေရမှာလားဆိုတဲ့ ခတ်တုံးတုံး ... အမေးမျိုးလည်း မေးတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ၊ အလုပ်လုပ်သည်၊ လှုပ်ရှားကြသည်ဆိုတဲ့ အခါမှာ ကိုယ်လုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ လူထုအတွက် အကျိုးဖြစ်မလား၊ အဆိုး ဖြစ်မလားဆိုတာ ပထမဆုံး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။
Author: lubo601 | 1:11 AM | No မှတ်ချက် |
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒီတပတ်မှာ လွတ်လပ်ပီးခေတ် မြန်မာသမိုင်းစာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောမလို့ အစက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတပတ်ဟာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ၆၄ နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ကျရောက်နေတဲ့အတွက် အာဇာနည်နေ့အကြောင်းပဲ တင်ဆက်ပရစေ။
အာဇာနည်ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပုံတွေကိုတော့ သောတရှင်များကို အထူးရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီ ပါဠိ သက္ကတစကားလုံးကို မြန်မာရာဇဝင်မှာ ဘယ်လိုရည်ညွှန်းသုံးစွဲခဲ့ကြပါသလဲ။
အာဇာနည်နေ့နှင့် ဦးရာဇတ်၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း
Author: lubo601 | 12:59 AM | No မှတ်ချက် |
ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့။ အာဇာနည်နေ့....။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်နှင့် ဂျပန် အုပ်ချုပ်မှု လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့စဉ် လွတ်လပ်ရေး ရရှိစေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ အာဇာနည် ၉ ဦး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံရသော (၆၄) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့....။
"စာဆိုတော်ဦးပုည ဖန်တီးခဲ့သည့် ဆာဝါ ရုပ်ပုံလွှာ"
Author: lubo601 | 12:51 AM | 1 Comment |
[By Zam Thang]
ပထမနှစ်သင်တန်းမှာ စာလေးပေလေးတွေကိုသင်ရတော့ အတော်လေး
ကိုစိတ်ပန်း လူပန်းမိတာကအမှန်ပဲ။ သို.သော်လည်းသင်ရိုးညွန်းတမ်းမှာ
ကံများကောင်းချင်တော့ ဦးပုညရဲ. ဥပကနှင့်ဆာဝါ ဟောစာပါလာတယ်။
ဦးပုညဆိုတာ စကားလုံးပြောင်တဲ့နေရာမှာ သူ.ပြင်မရှိသူဖြစ်လေတော့သူ.
စာဖတ်ရတာ ခပ်ကြိုက်ကြိုက်ပဲ၊ ဘယ်အခါဖတ်ဖတ် ဖတ်လိုမငြိးနိုင်ဘူး။
သင့်ရဲ့ နေ့ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်ပါ
Author: lubo601 | 11:32 PM | No မှတ်ချက် |
by Eingyin Ta Khaine on Saturday, July 23, 2011 at 10:45pm
ယခုတလော မိတ်ဆွေတွေရဲ့ Home page အသေးစားနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ အဖွင့်စာမျက်နှာတွေကို ကြည့်မိပါတယ်။ အဖွင့်စာမျက်နှာတွေမှာ အများဆုံးရေးထားတဲ့ စာသားက ဘာပါလိမ့်……ခရစ်ပ် ဒီယမ် (Carpe Diem) ဆိုလား…..
အဲသည်စကားလုံးကို ဟိုဟိုဒီဒီ အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်။
by Nyi Nyi Aung on Saturday, July 23, 2011 at 10:29pm
ကောင်မလေးက အသက် ၈ နှစ်ခန့်သာ ရှိဦးမည်။ မဲဆောက်ဈေးထဲ ၀ယ်သူတွေရဲ့ လက်ကို အတင်းတို့ကာ ကုတ်ကာနှင့် ပါးစပ်မှလည်း တတွတ်တွတ်
တောင်းပန်နေပြီး ပိုက်ဆံမရမချင်းအနားမှ မခွာတော့…။
ဈေးအနီးတ၀ိုက်မှာလည်း သူ့လို အလားတူပုံစံမျိုးတွေ။ ကလေးလေးများ၊ ဒုက္ခိတ လူလတ်ပိုင်းများ၊ မျက်မမြင် အမယ်ကြီးများ၊ ခြေထောက်မရှိတော့သည့် အဖိုးအို၊ ယောဂီဝတ်စုံနှင့် အမျိုးသမီး။ သူတို့အားလုံး တောင်းရမ်းသည့် အလုပ်ကို သဲကြီးမဲကြီး လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ဈေးသွားဈေးလာ တွေကလည်း သူတို့ကို မနည်းဖြတ်ကျော်သွားနေရသည်။
Sex on the Beach လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနာမည်လေးနဲ့ ကော့ခ်တေးလ်
Sex on the Beach လို့ခပ်ကြမ်းကြမ်းနာမည်လေးနဲ့ကော့ခ်တေးလ်ကို
မေးချင်တယ်၊ ဖန်တရာတေနေတဲ့ “ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ” လို့
by Win Ko Myint on Sunday, July 24, 2011 at 2:52am
စလုံးရေ စကတည်းက မက်လောက်စရာဘာရှိလို့လဲ အကျဉ်းအကြပ်ထဲ ကျဉ်းကြပ်နေတယ်
ဒီလိုပဲစကတည်းကချောက်ကျနေတော့ မြင်မြင်သမျှ သတ်နေရတယ်
သွေးညှီနံ့ ယမ်းနံ့ဟာ သေခြင်းဆိုတာထက် ဘာအနံ့အသက်မှမပိုဘူး
မသတ်ရင် သေမယ် ဒါ့ကြောင့်သတ်မယ်
ဆန်နီနေမင်း၏ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဒီကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဦးဇင်းကို လူတော်တော်များ မေးကြပါတယ်။ ခဏခဏလည်း ဖြေပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ယောင်ဝါးဝါးနားမလည် ဖြစ်နေကြတယ် ထင်ပါဘိ။ အဲဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ ဦးဇင်း တက်သိလေ့လာထားသမျှကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စုံစုံလင်လင်ဖြစ်အောင် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းအားကြီးလို့ လူကြီးလူကောင်းများအနေဖြင့် မသုံးသင့်တဲ့ မပြောသင့်တဲ့စကားလုံးများ ပါနေလျှင်လည်း နားနှင့်မနာ ဖ၀ါးနှင့်နာပါလို့ပဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
လူငယ်များ ဒီကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နားရှင်းကာ ရှောင်ကြဉ်လိုက်နာနိုင်အောင် ယခုအောက်ကမေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ အမေးနှင့်အဖြေလေးကတော့ ဒီလိုပါ။
ပြည်တွင်းက Gmail Acc အသစ်ဖွင့်မရသူများအတွက်
Author: lubo601 | 6:41 AM | No မှတ်ချက် |
by Kyi Win on Saturday, July 23, 2011 at 7:36pm
ဒီပို့စ်လေးတင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှ အင်တာနက်အသုံးပြုနေကြတဲ့ ညီအကိုသူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရတဲ့ gmail acc အသစ်ဖွင့်မရတဲ့ပြဿနာလေးကို
လတ်တလော မြန်မာပြည်တွင်းနေ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ gmail account အသစ်ဖွင့်ရာမှာ mobile phone မရှိပဲ new gmail acc ဖွင့်မရတော့လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့
ပြဿနာကမ်ိမိတို့၏ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ လုံးဝမပက်သက်ပါဘူး Google service ကဖောင်းပွနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
by Lu Cifer on Saturday, July 23, 2011 at 8:00pm
အော်မငေါက်ခင် မနှေးမမြန်လေး ဆင်းချလိုက်တယ်။
သူတို.တွေက မဟာ၇န်ကုန်မြို.တော်မှာ အသေးစားဘုရင့်...
by Lu Cifer on Saturday, July 23, 2011 at 6:12pm
ကျမတို့ ငယ်ဘ၀တလျောက်လုံးမှာရော၊ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အချိန်မှာရော စာတော်တာဟာ ဂုဏ်ပုဒ်တခုလို့ ထင်နေခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စာတော်ဖို့ကိုဇွတ်မှိတ် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ အဲဒီအတွေးတွေကို ကျမတို့ရဲ့ ရင်သွေး တွေထံ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ ကျမတို့ ထပ်ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ ပညာရေးအကြောင်းကို သိရတော့မှ ရင်ထဲမှာ ကလေးတွေကိုပဲ သနားနေမိ ပါတော့တယ်။
“ဒီပြတင်းပေါက်ကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ကြနဲ့တော့ ကြားလား။ အမြဲတမ်းပိတ် ထားလိုက် တော့”
မေမေက ပြောပြီး ပြတင်းပေါက်ကို သူကိုယ်တိုင်ပိတ်ကာ ချက်ထိုးလိုက်သည်။
ကျွန်မတို့အိပ်ခန်း၏ တစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက်၊ သူ့ကို နေ့ရောညပါ ပိတ် ထားလိုက်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်မသည် စိတ်ကူး ကမ္ဘာသို့ ညစဉ် အလည်သွားဖို့ အလွန် ခက်ခဲသွားပါသည်။
"Blog တစ်ခုရေးတော့မယ် ဆိုရင်."
Author: lubo601 | 10:35 AM | No မှတ်ချက် |
Blog မလုပ်ခင် အရင်စဉ်းစားပါ
Blog ရေးတာ အိမ်ဆောက်တာနဲ့ တူပါတယ်။ အိမ်သာတော့ ဧည့်လာတယ်ဆိုတော့လည်း ကိုယ့်အိမ် လေးကို လူတွေအလာများအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လှအောင်ပအောင် စုံလင်အောင် ရေးကြ၊ ဖိတ်ကြ တာပါပဲ။ ကိုယ့် blog လေးကို လူအလာများရင် ရလာတဲ့ ပီတိကိုတော့ blogger တိုင်း သိကြမှာပါ။ blogger မဟုတ်တဲ့သူတွေ ကျတော့လည်း ဟိုအိမ်သွားလည်၊ ဒီအိမ်သွားလည်နဲ့ ခြေတွေလည်း အတော်ညောင်း ကြတာပေါ့လေ။
by Wai Maw on Friday, July 22, 2011 at 6:50am
- ဝေမော် -18,7, 2011။-
မိတ်ဆွေကြီးတစ်ဦး အမှတ်တမဲ့ပြောပြဖူးတဲ့ စကားဥပမာလေးတစ်ခုက ကျနော့ခေါင်းထဲမှာ ဒီနေ့ဒီအချိန် အထိ နေရာယူလွှမ်းမိုးနေဆဲ… အတွေးနယ်ချဲ့လို့ကောင်းနေဆဲ ပဟေဠိတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်…။
ရာဒါကောင့် မှာ လူမစည်ပါ
Author: lubo601 | 7:43 AM | No မှတ်ချက် |
by Maw Jay on Friday, July 22, 2011 at 12:00pm
အိပ်လို့လည်းမပျော်တာနဲ့ မနေ့ညက တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးကိုရေးလိုက်တာပါ
ဖတ်ပေးပြီး ပြောချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း အားမနာတမ်းပြောလို့ရပါတယ်။
မနေ့က M သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အစ်ကို မရှိတော့လို့ ရာဒါကောင်း လူမျိုးပေါင်းစုံ သုဿာန်မှာ နာရေးလိုက်ပို့တာပေါ့၊ အဲဒီမှာ အနည်းငယ် တန်းစီပြီး တွေ့ရတာပါပဲ၊ ဘာတွေပါလိမ့်နော့်။ အခု လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေထဲက သေးသေး လေးလို့ ထင်ရတဲ့ ကြီးကြီး ကြီး တစ်ခုပါ၊ ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများသိကြပါတယ်နော့်။
by Eingyin Ta Khaine on Friday, July 22, 2011 at 8:49pm
စားပွဲပေါ်မှာတော့ ယူဆောင်မသွားဘဲ အမြဲတင်ထားတဲ့ စားပွဲတင် နာရီလေးက ရှိနေပါတယ်။ ပျက်နေတာလဲမဟုတ်ပါ။ ဘက်ထရီကို တမင် ဖြုတ်ထားခဲ့ခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သည်နာရီလေးဟာ အမြဲတမ်း ရပ်နေတာတော့လည်း မဟုတ်ပါ။ နှစ်စဉ် မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ၁၈ မိနစ်စီ ရှေ့ကို နာရီလက်တံကို ရွေ့ခဲ့ပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:30 AM | No မှတ်ချက် |
အစာကို အလွန်အကျွံစားသောက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကလည်း အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ပျင်းတာကြောင့် ပိုစားဖြစ်သွား တာလား၊ ၀မ်းနည်းလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆိုးလို့ စိတ်ပျက်လို့ အဆင်မပြေတာရှိလို့ စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
"့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး "
Author: lubo601 | 2:12 AM | 1 Comment |
Lightof Saw created the doc:
အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး (သို့မဟုတ်) ဧရာဝတီ
Author: lubo601 | 2:07 AM | No မှတ်ချက် |
by We are Burmese! on Friday, July 22, 2011 at 1:44pm
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဟာ ကချင်ပြည်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းတို့ကို လွှမ်းခြုံနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံးရဲ့ ၆၁% ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းက ကရင်၊ ဗမာ၊ မွန် နဲ့ ရခိုင် ၈ သန်းနီးပါး၊ ရန်ကုန်တိုင်းက လူမျိုးစုံ ၆ သန်း၊ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းက ကရင်၊ ဗမာနဲ့ မြေပြန့်ချင်း ၂.၅ သန်း၊ မကွေးတိုင်းက ဗမာနဲ့ မြေပြန့် ချင်း ၄ သန်း၊ မန္တလေးတိုင်းက ဗမာ နဲ့ ရှမ်း ၅ သန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဗမာ နဲ့ ရှမ်းနီ ၄ သန်း၊ ကချင်ပြည်က ကချင်နဲ့ ရှမ်းနီ ၁ သန်းနီးပါး၊ စုစုပေါင်း သန်း ၃၀ ကျော်ဟာ ဧရာဝတီကို မှီခိုနေရပါ တယ်။ ဒါဟာ တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေ ၅၇ သန်း (၂၀၀၈ ခု ခန့်မှန်းချက်) ရဲ့ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအနေ နဲ့ဆိုရင် တနိုင်ငံလုံးရဲ့အထွက် ၇၀% အထိ အဓိကကျနိုင်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:05 AM | No မှတ်ချက် |
နိုင်ငံရေးပါတီအများအပြား ပေါ်ထွက်လာပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ တာဝန်မဲ့
ပြုလုပ်မည်စိုးသဖြင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းဥပဒေကို အစိုးရက
ပြဋ္ဌာန်းလေ့ရှိ၏။ အထူးသဖြင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို
စတင်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ၌ နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ ဥပဒေကို
ပြဋ္ဌာန်းကြသည်။ တင်းကျပ်သည့်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းသောနိုင်ငံတွင်
နိုင်ငံရေးပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုး ဆေင်ရွက်နိုင်မည့်အလားအလာ
နည်းပါးသွားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဥပဒေမရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီများ
တာဝန်မဲ့ပြုမူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရှိသဖြင့် မှန်ကန်သော
နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။
Author: lubo601 | 1:49 AM | No မှတ်ချက် |
by Wai Maw on Friday, July 22, 2011 at 1:24pm
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ဝေမည့် ဂျာနယ်အတွက် စာမူတောင်းပါတယ်။ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ဟာ အမျိုးဂျာနယ်/မိတ်ဆွေဂျာနယ်လို့ပြောရင်ရနိုင်တာပေါ့လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အယ်ဒီတာချုပ်၊ အယ်ဒီ တာတွေ နှင့် ထုတ်ဝေသူအားလုံးဟာ မောင်မိုးသူရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ရဲဘော် မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် လည်း ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို မောင်မိုးသူလည်း တက်ရောက်ပြီး အခမ်းအနားမှာ ဦးသက်ထွန်း၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်တို့နဲ့အတူ ကြိုဆို စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သြော်… အခုတော့ တစ်နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပါပြီကော။
"အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ Reggae ဂီတ "
Author: lubo601 | 1:40 AM | No မှတ်ချက် |
သံစဉ် မြူးမြူးကြွကြွ လေးတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေအတွက် အလွမ်းအဆွေး မပါဘဲ၊ နူးညံ့တဲ့ အချစ် စာသားလေးတွေကိုသာ သံစဉ်မြူးမြူးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Reggae (ရက်ဂေး)လို့ ခေါ်တဲ့ ဂီတတစ်ခု အကြောင်းကို နဖူးကနေ ခြေဖျားအထိ တင်ဆက်ပြသ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
image from redraggallery.co.uk
ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်တွင် ယဉ်၏ အမျိုးသားထိုင်နေသည်။ နံဘေး တဖက်တချက်တွင် ယဉ်နှင့် ယဉ်၏ ယောက္ခမတို့ ထိုင်နေသည်။ အလယ်တွင် ထမင်းဝိုင်းရှိသည်။ ကျနော်က ယဉ့်အမျိုးသားကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်သည်။ ထိုလူက မရိပ်မိသော်လည်း ယဉ်က ကျနော့်အကြည့်ကို သိသည်။ ကျနော့်အကြည့်တွင် ငါ့ထက် သူက ဘာ သာသလဲဟူသော နာကျည်းသည့် အတွေးကို ယဉ်က အလုံးစုံဖမ်းမိအောင် ပါးနပ်သည်။ တကယ်က ရုပ်ရည်မသာသည့်တိုင် မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ဘဝအာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် ပစ္စည်းဥစ္စာဓနတော့ ထိုလူက ကျနော့်ထက်သာပါသည်။ ရင်သည် စူးကနဲ နာသည်။
ဦးစန္ဒောဘာသ၏ ၁၆ နှစ်တာ ထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမှု ဖြစ်စဉ်။
by Zinzinkyaw Zinzin on Monday, July 18, 2011 at 10:03am
ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် မယ်လမုဘုရားသို့ ကြွေ၇ာက်ပါဘုရား။
၈.၆.၉၃ နေ့လည် ၁ နာရီ။ ဖိတ်စာအ၇ မယ်လမု စုရပ်မှနေ၍ ရွှေတိဂုံဘုရား ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်း သစ်လုံးစားတော်ဆက်အတွင်း၌ အစည်းဝေးပြုလုပ်နေစဉ် အရပ်ဝတ် ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူ ၁၂ ယောက်ပြေးဝင်လာပြီး လက်လှန်ချိုးသူကချိုး၊ လည်ပင်း ညှစ်သူက ညှစ်၊ သေနတ်ဖြင်ံချိန်ပြီး သင်္ကန်းဝတ်တွေ မလှုပ်နဲ့၊ မခုခံနဲ့၊ခုခံ၇င် ပစ်လိုက်မည်ဟု ပြောပြီး ဦးဇင်းတို့၏ မျက်နှာများကို အဝတ်များဖြင့်စည်းကာ ကားပေါတင်၍ ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
အခါလည်းနှောင်းခဲ့ပြီ လွမ်း အဉ္ဇလီ ရေး ...
by Aungmyo Tun on Wednesday, July 20, 2011 at 11:20pm
တစ်ခါတစ်ရံ လသာတဲ့ညမှာဆို အတူတူတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မှီပြီး အရသာခံဖို့ ချစ်သူကို
အောက်မေ့ကြတယ်။ မိုးအုံ့ တဲ့ညနေပိုင်းတွေကျ အထူးသဖြင့် အိမ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေတဲ့အခါဆို
အမေ့ရင်ခွင်မှာပြန်ခိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ ဆီးနှင်းတွေပိန်းပိတ်မှောင်ပြီး တကယ်ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်
ချမ်းတဲ့ ဆောင်းညတွေမှာကျ ဘ၀ကြင်ဖော်ရဲ့ ရင်ငွေ့ကို လှုံချင်ကြပြန်တယ်။
Author: lubo601 | 3:10 AM | No မှတ်ချက် |
by Hlaing Bwa Maung on Wednesday, July 20, 2011 at 11:51pm
လူများပြီး ပွဲမစည်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ် …။
အရူးကို လင်လုပ်ထားရတဲ့မြို့ဖြစ်တယ် …။
Author: lubo601 | 3:08 AM | No မှတ်ချက် |
BigBrother Myanmar createdadoc.
[By Khine Khine]
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တာ ကလေးက မကျလို့ တဲ့ ထိုင်းလက်သည်အိမ်ကနေပြန်လာပြီး မဲဆောက်က မြန်မာလက်သည်နဲ့သွားပြန်ဖျက်ဖို့ကားစီးတာ အဲ့ဒီကားပေါ်မှာပဲ ဆုံးသွားတယ်။ သူထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံက ဒရိုင်ဘာနောက်က ခုံလေးမှာ ကားပေါ် စတက် တော့ မျက်နှာသွေးမရှိသလိုဖြူဖျော့ နေလို့ ဒရိုင်ဘာက ညီမ နေမကောင်းဘူးလားလို့ မေးတယ်တဲ့။
Author: lubo601 | 2:51 AM | No မှတ်ချက် |
[By Ernesto Kee Ling]
Author: lubo601 | 2:42 AM | No မှတ်ချက် |
နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ သူ့ချည်း သက်သက် ထားရန်မဟုတ်၊ အသုံးဝင်မှု တစ်ခုခု ရှိရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးကို ဘာများပိုပြီး လုပ်နိုင်သေး သလဲဟု မေးရန်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်၊ အဟောင်းနှင့် အသစ်ချည်း သက်သက် ဝေဖန် သုံးသပ်ရန် မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးမှ အကျိုးအမြတ် ဘာရနိုင်သနည်း၊ ဘယ်လို ရနိုင်သနည်း၊ ဘယ်လောက် ရနိုင်သနည်း ဆိုသည်ကိုပါ ထည့်တွက် နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
သက်သတ်လွတ် စားသင့် မစားသင့်
BigBrother Myanmar createdadoc
သုစရိတ။ ။ ဘယ့်နှယ် ဒီတစ်ခါ ဆရာ ဒဿနကြီးက အလျင်စလို စောစောစီးစီး ပေါက်လာပါလား။ လက်ထဲမှာလည်း စာအုပ်ကြီးနဲ့။ ဘာစာအုပ်များတုံး။
သုဒဿန။ ။ ဒါ စင်္ကာပူ ကလျာဏယုဝအသင်းက ထုတ်တဲ့ The Young Buddhist ၁၉၈၅ နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်းလေ။ ဒီအထဲပါတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့သဘောထား အမြင်ကို မေးစမ်းဖို့ လာခဲ့တာ။
အပြာရောင် Blues ဂီတ
Author: lubo601 | 2:27 AM | No မှတ်ချက် |
by အား မာန် on Thursday, July 21, 2011 at 5:18am
နိုင်ငံရေးတွင် ပါတီနှင့် ပြည်သူများ အခန်းကဏ္ဍ
နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထင်ရှားဆုံးနှင့် အပေါ်လွင်ဆုံးမှ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဖြစ်သည်။ စနစ်အတွက် ပါတီသည် အသက်ဟူ၍ပင် ဆိုနိုင်သည်။ ပြည်သူတိုင်း ပါတီကို စိတ်ဝင်စားသည် ဟူ၍တော့ မပြောနိုင်ပေ။ တစ်ခုခု မကျေနပ်ချက်များ ပေါ်လာလျှင်၊ အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဟိုအော် သည်အော် ပါတီတွေက ၀င်လုပ်ပေးလာလျှင်၊ မျှော်လင့်ချက်များ ပေးနိုင်လျှင်၊ ပေးနိုင်ကြောင်း အပြောကောင်းလျှင်၊ ပါတီအပေါ် စိတ်ဝင်စားချင်ချင် ဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။ မဲပေးပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြတာပဲ၊ ခုတော့ နားငြီး သက်သာအောင် မဲပေးလိုက်ကြ ဆိုသည့် လူတန်းစားက အများစု ဖြစ်နေတတ် သည်ကိုလည်း သတိပြုကြရမည်။
တွေးစရာလေးများ: AZY 0019
Author: lubo601 | 11:35 AM | No မှတ်ချက် |
လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် စောင့်စည်းရမည့် လူ့စည်းကမ်းများ ရှိသည်။ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရာတွင် အသိပညာ ဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန် အကူအညီပေးခြင်း၊ အပြန်အလှန် စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့သည် လိုလားဖွယ် ဖြစ်သည်။ ရန်လိုခြင်း၊ အမုန်းစကား ဆိုခြင်း၊ ၀င့်ဝါခြင်း၊ မောက်မာခြင်း၊ ချိုးနှိမ်ခြင်း၊ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်ခြင်းတို့သည် မလိုလားအပ်သော အပြုအမူများ ဖြစ်သည်။
Author: lubo601 | 11:20 AM | No မှတ်ချက် |
[By Sanda Hlaing]
“ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုကတည်းက သည်ယောက်ျားရဲ့ ရာထူးဝင်ငွေ၊ အရည်အချင်းနဲ့ ဂုဏ်သိကာကို စဉ်းစားပြီးမှ မိန်းမတစ်ယောက်က လက်ခံခဲ့တာပဲ။ တကယ့် တကယ် လက်ထပ်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့မှ ရာထူးတို့၊ ၀င်ငွေတို့၊ အရည်အချင်းနဲ့ ဂုဏ်သိကာတို့နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ကိုယ်လက်ထပ်တဲ့ ယောက်ျားရဲ့ မယားဖြစ်ရခြင်းဟာ ရေထမ်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ မယားဖြစ်ရတာလောက်မှ ပျော်စရာ မကောင်းမှန်း နားလည်လာရတယ်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ ရေထမ်းသမားရဲ့ မယားဟာ သူ့ယောက်ျားရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ပိုရလို့ပဲ”
Author: lubo601 | 10:47 AM | No မှတ်ချက် |
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မွေးရာပါ ရုပ်မလှချင်နေ ဒါပေမဲ့ ဘ၀မှာ လှလှပပတော့ ရှင်သန်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည့်စုံတဲ့အသိပညာ၊ ကောင်းမွန်တဲ့စာရိတ္တ၊ ထက်မြက်တဲ့ အပြုအမူ၊ သိမ်မွေ့တဲ့အပြောအဆို၊ ကြိုးမြတ်တဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ မေတ္တာနဲ့ပြည့်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ရည်မလှသည့်တိုင် ဘ၀ကို အမှန်တကယ် လှပစေနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ လှလှပပရှင်သန်နိုင်သူဟာ လှပတဲ့စိတ်ခံစားမှု၊ အဆင့်တစ်ခု၊ စိတ်ဝိညာဉ် တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မစွန့်လွတ်သရွေ့ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်တက်လှမ်းကို တားဆီးပိတ်ပင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Mingalarpar: မညွှန်းရဲသော စာအုပ်များ ၊ ကြည်ညွန့် ၊ ချစ်ကြည်ရေး.....: "၁၉၇၆ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်ပြည်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မဟာ ပစ္စည်းမဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးပြည်တည်နာက မြန်မာပြည်တွင် အနာရှိန်တက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်..."
Author: lubo601 | 9:29 AM | No မှတ်ချက် |
ကမ္ဘာပေါ်တွင် သက်ရှိများဖြစ်ပေါ်လာမှုတွင်အချို့သောမျိုးစိတ်ဖြစ်သည့် ဒိုင်နိုဆောသတ္တ၀ါကြီးများမှာ
တချိန်တုန်းဆီက ရှင်သန် ကျက်စားခဲ့ကြကြောင်းကို ယင်းတို့၏ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကသက်သေခံလျက်
ရှိနေပေသည်။ ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းများ၏ သက်တမ်းမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်း (၁၂၀) က ဟုဆိုကြသည်။
သို့ဆိုလျှင် ဤသတ္တ၀ါကြီးများ အဘယ်ကြောင့် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်ကုန်ကြသနည်း....
"အချစ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ခဲပေါက်တဲ့ ဓလေ့"
အနာဂါမ်မဖြစ်မချင်း အချစ်နဲ့ မကင်းဟု ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်...
လောကတွင်ရှိရှိသမျှသော လူသားအားလုံး အချစ်နဲ့မကင်းနိုင်ကြပါ...
အချစ်ထက်အရေးကြီးသော အရာများလည်းလောကမှာ အများကြီးရှိနေသေးသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်သည်...
လူတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်သော အင်အားကြီးမားတဲ့ အရာများထဲမှာအချစ်လည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ငြင်းနိုင်မယ့်သူရှိနိုင်ပါမလဲ...
"လောကကြီးတွင် လူတစ်မျိုး ရှိသည်.........."
ကိုယ်နှင့်အတူရှိသော အချိန်များတွင် အစားအသောက်ကောင်းများကို ကိုယ့်အတွက်
အမြဲချန်ထားတတ်ပြီး ရာသီဥတုအေးလျှင် အနွေးထည်ထပ်ဖို့၊ အပြင်ထွက်လျှင် အစစအရာရာ
သတိနှင့်နေဖို့ ဂရုတစိုက် အမြဲမှာတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုအပြောများကို ကိုယ်ကနားပူသည်ဟု
ထင်ခဲ့သော်လည်း စိတ်ထဲတွင်မူ နွေးထွေးသောမေတ္တာကိုခံစားရသည်။ ကိုယ့်မုန့်ဖိုးလိုသောအချိန်
လက်ဖြန့်တောင်းလျှင် ပိုက်ဆံရှာရသည်မှာ မည်မျှခက်ခဲကြောင်း၊ ပိုက်ဆံ၏ တန်ဖိုးကိုပြောပြတတ်သည်။
ပါးစပ်က တပျစ်တောက်တောက် ရေရွတ်နေသော်လည်း လက်ကပိုက်ဆံကမ်းပေးနေတတ်သည်။
ထိုလူမျိုးကို မိဘ ဟုခေါ်သည်။
Theory ကတော့ good။ Practical ကတော့ဖွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက
"သေချာရေရာမှု ဘာမှမရှိတဲ့ ဟန်ပြ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲက...
"ကမ္ဘာလောကကြီး သာယာစေချင်လျှင် သင့်မျက်နှာကို အရင်ဆ...
"အရေပြားပေါ်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည့် ဆေးဓာတ်မတည့် အလာ...
'စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု မရှိဘဲ သင်ယူခြင်းဟာ လုပ်အားဆုံးရ...
Facebook နှင့် Google တို့၏ သူသေ ကိုယ်မသာ တိုက်ပွဲ...
Sex on the Beach လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနာမည်လေးနဲ့ ကော...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိတဲ့တိုင်းပြည် မြန်မာပြည် … ...